Maxaa ku dhacay mashruuca 'Trambus Şanlıurfa'? Madaxweynihii hore Farmaajo ayaa ku dhawaaqay | RayHaber | raillynews
HomeTURKEYGobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia63 SanliurfaMaxaa ku dhacay mashruuca 'Trambus Şanlıurfa'? Madaxweynihii hore Farmaajo ayaa ku dhawaaqay
15 / 01 / 2020 63 Sanliurfa, Gobolka Waqooyi-galbeed ee Anatolia, GUUD, WADADA, Nidaamyada Tire Wheels, Headline, TURKEY, baska tarooli
mashruuca sanliurfa trambus wixii dhacay
Duqii hore ee magaalada caasimada ee hatanlıurfa Nihat madeiftçi ayaa bayaan ka soo saaray akoonkiisa warbaahinta bulshada ee ku saabsan mashruuca Trambus.
Trambus, oo ku soo biiray nidaamka gaadiidka dadweynaha si loo fududeeyo gaadiidka Duqa Magaalada Nihat Çiftçi oo ku taal Eski Şanlıurfa, ayaan markale ka qeyb galin. Bayaanka uu soo saaray Nihat Çiftçi, Duqa Magaalada Şanlıurfa ee Magaalada Magaalo Weyn, oo lagu cadeeyay inuu awood buuxda leeyahay 21 November, maanta looma furin gaadiid.
Duqa hore, Nihat Çiftçi, oo la wadaagay akoonka rasmiga ah ee warbaahinta bulshada, ayaa wuxuu ku yiri qoraalkiisa soo socda: 'Kooxdeena waxay diyaariyeen qorshe gaadiid tareen ah goobta gaadiidka dadweynaha ee Şanlıurfa. Madaxa kooxda diyaariyey mashruucan gaadiid, Prof. Dr. Waxaa jiray Rafet Bozdağ. Macallin Rafet wuxuu ka shaqeeyey la-taliye xagga gaadiidka. Wuxuu sanado ka soo ahaa tababbaraha gaadiidka wuxuuna madax ka ahaa waaxda gaadiidka ee Magaalada Caasimadda ah ee Istanbul muddo sannado ah. ''
Iyaga oo leh kooxdayada Gaadiidka, oo uu madax u yahay Rafet, Shirkadda Gaadiidka ee Kayseri. Fikradda kooxda oo ka kooban khubaro iyo jaamacadda Yalova; khadka ugu mashquulka badan ee Şanlıurfan waa safka 43-aad ee ay raacaan 63 oo rakaab ah maalin walba, khadka tareenka laga bilaabo xarunta aruurinta ilaa Balıklıgöl marxaladda koowaad, laga bilaabo bartamaha Şanlıurfa ilaa waqooyiga, Karaköprü Fair oo ka socota bartamaha Şanlıurfa -iyar. nidaamka tareenka laga bilaabo xarunta illaa xarunta wareejinta gaadiidka dadweynaha, marxaladda saddexaad; Nidaamka garaacista ee wadada Akçekale ilaa isbitaalka Collection Center Eyyübiye, marxaladda afaraad; Warbixin ayaa la soo bandhigay in dhibaatada gaadiidka ee Şanlıurfa lagu xallin doono konton sano iyadoo lagu rakibayo nidaamka tareenka wadada Mardin illaa Jaamacadda Harran. Warbixintan waxaa soo saartay Wakaaladdayada; Waxaa loo gudbiyay golaha dawlada hoose ee magaalada, gudigayaga gaadiidku wuxuu qiimeeyay arinta, golaheena wuxuu ogolaaday madaxwaynaheena marka loo eego mashruuca. ''
Hayadayada, waxaa la go'aamiyay in la diyaariyo mashruuca wejiga koowaad ee warbixintan, si loo ballaariyo wadada wejiyadaha kale, loona abaabulo kaabayaasha iyo isgoysyada. Iyadoo mashruuca nidaamka tareenka ee marxaladda koowaad la baranayo; Waxaa laga codsaday kooxaha farsamada in dhammaan kaabayaasha wadada ee sii gudbaya jidka Divan ay noqdaan barakac. Baadhitaanka uu sameeyay Agaasinka Guud ee Shuski, aragtida ah in biyaha, kanaalada, Telecom, daadinta roobka, laymanka Tamarta ay ka gudbaan 4 illaa 5 mitir isla markaana barakac aysan suurtagal ahayn. Qiimaynta la sameeyay, waxaa la go’aansaday in halkii la dhigi lahaa taraamyada taraafikada kaabayaashan awgeed, taraamyada leh astaamaha oo dhan marka laga reebo tareenka ayaa ku habboonaan kara darooga awgeed. Mashruuca ay soo diyaariyeen kooxaha ayaa loo saaray in lagu furo qandaraas dhammaan shuruudaha qeexidda farsamada iyo maamulka. Ankara Xaqiijinta qandaraaska Bozankaya AŞ ayaa ku guuleysatay shirkad. Shirkadda ayaa leh aqoon waxayna ka hirgelisay mashruucyo gaadiid iyo tareen oo guul ah Kayseri, Bursa, Malatya iyo gobolo kale oo badan. Qiimaha jilicsan ee mashruuca Trambus wuxuu ahaa 60 milyan. 30 milyan oo ka mid ah ayaa iska leh xariiqyada, dhismayaasha, tamarta, qalabka wax baara, joojinta, iwm. Waxay ka koobnayd 30 11-mitir baabuurta xamuulka ah 24 milyan. Shirkaddu waxay bilaabatay inay shaqeyso. Wuxuu dhammeystirey superstructure-ka waqtiga. Iyada oo la raacayo go'aanka guddiga ilaalinta, waqti dheeri ah ayaa la siiyay isbeddelada qaarkood ee mashruuca. sarrifka kordhay Turkey inta lagu guda jiro gaadiidka TRAMBUS soo saarta. Sababtaas awgeed, shirkadda waxay ku adkaatay soo saarista mashiinnadaas oo ay geysteen. bulunarak si aad u dalbato in wasaaradda, sida dhammaan shirkadaha ee Turkey sheegay in lagu waxyeelleeyo sababo la sarrifka height heerka. Markii la soo saaray sharci-dejinta sharci-dejinta, shirkadaha qandaraasleyda ah waxaa lasiiyay xaqa ay ku joojinayaan qandaraaska dheeriga ama mideysan. Shirkadda qandaraaslaha ah waxay adeegsatay xuquuqda muddo dheeri ah oo ah 7-8 bilood soo saarista mashiinnada Xafiiska Gaadiidka. Intaan muddadan la bilaabin, ayaa madaxweynenimadayda la dhammeeyay
Fahamka ah in dadweynuhu soo noqon waa mid gabi ahaanba aan macquul ahayn. Markii khadka la dhammeeyay, dhowr isku day ayaa la sameeyay. Tijaabadii gaariga ayaa si guul leh looga gudbey. Ujeedada mashruucan ayaa ahayd in lagu fuliyo cufnaanta khadka 63 lagana wado 40 mishiino tigidhada ah halkii ay ka noqon lahayd 50-11 bas oo ku habboon, xaalad fiican iyo waqti gaaban.
Waxa ay tahay in hadda la sameeyo: Haddii shirkadda qandaraaska fulisay ballanqaadkeedii waqtiga dheeraadka ah; dammaanadda ayaa isla markiiba lagu duubi doonaa hay'adda waxaana khadka loo bixin doonaa hindisada isla markaana waxay ku shaqeyn doontaa Khadka. Mashruucan malahan jid farsamo ama maamul. Ujeeddadu waxay ahayd in la keeno tayo sare leh Gaadiidka Şanlıurfa. Mashruucan; hadda laguma sameyn karo qiime ka sarreeya afar jeer. Dhamaan faahfaahinta iyo runta shaqada waa sida aan kuu sheegay. Arimahan waxaa lagu habeeyay dukumintiga xafiiska gaadiidka, iyo khabiirada iyo mas'uuliyiinta nala shaqeeya ayaa ka marag kacaya tan. Maaha wax sax ah in mashruucan loo hibeeyo dadka aan aqoonta u lahayn qaarkood ee aan dooneynin Sanliurfan inay horumar sameeyaan. Waa khalad in la bixiyo khidmadaha qummanaanta aragtiyaha la abuuray.
Tani waa dhammaan macluumaadka ku saabsan mashruuca trambus-ka. Waxaan si xushmad leh ugu bandhigayaa macluumaadkan dadweynaha Şanlıurfa. Hadal ayuu jeediyay. (İbrahim Çakmak - Urfanatik)
Bachkan Çelik ayaa waydiistay Trams Kayseri Trams cusub
Waqtiga Trambus wuxuu bilaabmaa Shanleyurfa
Waddooyinka Trambus Asphalt in Sanliurfa
Shanliurfa waddada Diyarbakir
Wadada Tranlıurfa Trambus
Maxaa ku dhacay mashruuca 'Trambus Şanlıurfa'